MoEngage: Nyochaa, Nkeji, Mee, ma hazie njem nke Ndị Ahịa Na-ahụ Maka Ndị Ọrụ | Martech Zone
Ndị na-eji ekwentị mkpanaka eme ihe dị iche. Ka ndụ ha na-agagharị na ekwentị ha, ha na-asọba n'etiti ngwaọrụ, ọnọdụ, na ọwa. Ndị na-eri ihe na-atụ anya ụdị ka ọ bụrụ na nzọụkwụ soro ha ma nyefee ahụmịhe nke onwe gafee isi aka niile na dijitalụ. Ebumnuche MoEngage bụ inyere ụdị aka nyocha, nkewa, itinye aka ma hazie njem nke ndị na-ere ahịa.
Nyochaa njem ndị ahịa
Ihe omuma nke MoEngage nyeere aka ahia aka na ichota njem ndi ahia ka ha we banye, jigide ma bulie uru onye ahia obula.
Ihe ntụgharị ntughari - Chọpụta usoro akọwapụtara ebe ọtụtụ ndị ahịa si adapụ. Mepụta mkpọsa iji kwụọ ụgwọ ndị ahụ ma weghachite ha na ngwa gị, ụlọ ahịa, ma ọ bụ akara aka na-adịghị n'ịntanetị.
Behavioral ioraldị - Mara otua ndị ahịa si etinye aka na ngwa gị ma soro KPI gị. Jiri nghọta ndị a mepụta mgbasa ozi itinye aka nke ukwuu.
Ndabere Cohorts - Ndị ahịa otu n'otu dabere na omume ha, omume igwe mmadụ, ọnọdụ ha na ụdị ngwaọrụ ha. Nyochaa omume ha n'oge ụfọdụ ma chọpụta ihe na-eme ha arapara n'ahụ.
Mepee nchịkọta - Na-anakọta ma jikwaa data ndị ahịa gị niile n'otu ebe. Jikọta na ngwaọrụ dịka Tableau na Google Data Studio maka nlele anya dị mfe, na-enweghị mkpa maka ngwa ETL.
Nchịkọta Isi mmalite - Tulee ihe omuma ahia nke ndi ahia gi na otu dashboard. Ghọta usoro ntụgharị dị elu ma ọ bụ ọwa ma lekwasị anya na mmefu ego gị.
Jiri ọgụgụ isi kee ndị na-ege gị ntị
Ngwunye nkewa nke AI, nke na-ekewa ndị ahịa gị na micro-groups dabere na omume ha. Ugbu a ị nwere ike ịtọ ndị ahịa ọ bụla ụtọ site na iji onyinye, nkwanye, ọkwa, na mmelite nkeonwe.
Ngalaba Amụma - Kpọkọta ndị ahịa gị n’ụdị dịka ikwesi ntụkwasị obi, nkwa, ihe egwu, na ihe ndị ọzọ dabere na omume ha. Jiri ụdị amụma MoEngage iji chọpụta ndị ahịa nwere ike ịzaghachi na nkwalite.
Ngalaba omenala - Mepụta ngalaba micro dabere na njirimara ndị ahịa na omume ha na weebụsaịtị gị, email, yana ngwa gị. Zọpụta ndị ahịa gị ma weghachite ha n'ụzọ dị mfe na ndụ ndụ ha.
Soro Ndị Na-ege Gị Ntị Nọ Ebe Ha Nọ
Mepụta enweghị nkebi, ndị ahịa ejikọrọ gafee ọwa na ngwaọrụ. Jiri anya nke uche gị hụ, mepụta ma mepụta mkpọsa ndị ahịa na-eme. Kwe ka injin AI MoEngage gosipụta ozi ziri ezi yana oge kwesịrị ekwesị iji zipu ya.
Orchestration Njem - Ọ dịbeghị mfe iji anya nke uche hụ na mepụta njem omnichannel. Nọnyere ndị ahịa gị ọ bụla ị na-eme ma rụọ ọrụ njem ha site na ịbanye na itinye aka na ntụkwasị obi ogologo oge.
Ai-Chụpụrụ Optimization - Na mkpọsa ọtụtụ, MoEngage's AI Engine, Sherpa, na-amụta arụmọrụ nke ụdị ọ bụla na ozugbo ma na-ezigara ndị ahịa ụdị dị iche iche kachasị mma mgbe ha nwere ike ịtụgharị.
Ntughari nkwuputa - Imeri netwọk, ngwaọrụ, na OS mgbochi n'ime usoro okike nke gam akporo iji nyefee ndị ahịa gị ihe ngosi gị.
Ntuziaka ntuziaka - Jiri aka melite A / B na Multivariate ule. Tọọ ndị otu na-achịkwa, na-agba ọsọ nnwale, tụọ ugwu, ma jiri aka na-agagharị.
Ikike nke Onwe Otu na Otu
Mepụta ahụmịhe nke onwe nke na - emeri ndị ahịa maka ndụ. Jiri obi uto ha nye ha obi uto ha na onyinye ha dabere na ihe ha choro, omume ha, omume ha, ihe ndi ozo, na ihe ndi ozo.
Ntuziaka nkeonwe - Mekọrịta katalọgụ ngwaahịa gị ma ọ bụ ọdịnaya gị na mmasị ndị ahịa, omume, usoro ịzụta na omume. Jiri obi uto mee ha obi uto.
Nhazi weebụ - Di omimi gbanwee ọdịnaya weebụsaịtị, onyinye, na ịdebe peeji nke ibe dị iche iche. Debe ọkọlọtọ omenala na nhazi peeji nke na-agbanwe agbanwe dabere na omume ndị ahịa, omume igwe mmadụ, mmasị na ọdịmma ya.
Izipu ozi na saịtị - Pụgharịa na ọkọlọtọ website mmapụta gbasie. Site na izipu ozi saịtị ị nwere ike iji amamihe bute mmapụta webụsaịtị ahaziri iche dabere na omume na njirimara ndị ahịa.
Geofencing - Site na ikike ime mmụọ nke MoEngage, ị nwere ike ịkpalite ọkwa dị oke mkpa yana nke dabere na ọnọdụ onye ahịa gị ugbu a.
Hụ otu Platform Ndị Ahịa MoEngage Nwere Ike Isi Nwee Atụmatụ Uto Gị.
uru nghọta miri emi n'ime otu ndị ahịa si etinye aka na ngwa gị ma mepụta mkpọsa ndị ezubere iche siri ike.
Mepụta hyper-ahaziri izi ozi na itinye aka iji nyere ndị ahịa aka n'akụkụ isi aka dị iche iche.
Leverage AI izipu ozi ziri ezi n'oge ahụ, ma mepụta ọtụtụ mkpọsa iji nwalee ụdị dị iche iche kachasị mma.
Tags: ai-chụpụrụ ngalabaomume omumentughari funnelsnyocha njem ndị ahịantinye aka na data-dataike ọdịnayageofencingnjikarịcha njemnjem orchestrationakwụkwọ ntuziaka njikarịchanchịkọta azụmahịa nke ekwentị mkpanaakamoengageozi onsitekeonweakụkụ amụmaNkwado ngwaahịakpọbata ọkwankewanchịkọta nchịkọtaNhazi web
Vuelio: Mgbasa ozi mmekọrịta gị na mmetụta gị